Umvelisi ogqwesileyo weMbewu yamaDiliya kunye neFektri | I-CCGB
Izinto zaseYurophu ekrwada, imveliso enkulu
Incindi yembewu yomdiliya ngumgubo obomvu o-orenji okhutshwe kwimbewu yeediliya ekumgangatho ophezulu waseYurophu, emva kokukhutshwa okubonakalayo, uhlalutyo lwentlaka, ukugxila kunye nokomisa isitshizi. Isetyenziswa ikakhulu kukhathalelo lwempilo, izinto zokuthambisa nakwezinye iinkalo.
Umthombo wezityalo: Imbewu yomdiliya waseFrance
Umsebenzi: Ukukhutshwa kwembewu yomdiliya kungasusa ngokufanelekileyo iiradicals ezisimahla emzimbeni womntu kwaye kunefuthe elimangalisayo ekuchaseni ukuguga kunye nokwandisa ukukhuselwa komzimba.
1.Uthelekiso phakathi komgangatho we-USP kunye nomgangatho weCCGB
Sample USP isampuli esemgangathweni
◆ Ukukhutshelwa kwembewu yeediliya kwiCCGB
3 - (+) - ikatekini
I-4- iProcyanidin B2
Isiphelo: Xa kuthelekiswa nomfanekiso wesampulu oqhelekileyo we-USP, izinto ezibonakalayo kwiimveliso zethu ziyahambelana nezo ze-USP isampulu esemgangathweni, kwaye umxholo we-oligomeric proanthocyanidins uphezulu kunomgangatho.
2.Ukuchongwa kobuchwephesha bokukhutshwa kwembewu yeediliya
Ext Susa imbewu yeDiliya kwiCCGB
Ext Isicatshulwa seMbewu yamagilebhisi exutywe ne-1% yePeanut Skin extract
Ext I-Grape Seed Extract exutywe ne-1% yePine Bark Extract
Isiphelo:INDLELA YOKUDLULA IMBEWU YENDALO NGOKWENDALO ineempawu ezi-7 ezizodwa ezibalaseleyo kwaye incopho ye-OPC ilinganiselwe, ngelixa ixutywe nolusu lwepeanut okanye isicatshulwa sepine bark, eli nani lahluke mpela. I-CCGB inikezela ngembewu yendalo yediliya kuphela kwaye iyakwazi ukwahlula ukuba isampulu iyi-100% yendalo.
1.Sikhetha umgangatho ophezulu wembewu yeediliya zaseFransi njengezinto ezingavuthiyo, ukuze imveliso ibe nomgangatho olungileyo kunye nomxholo we-oligomeric proanthocyanidins. Uhlobo oluthile kunye novavanyo oluthile lubonisa umgangatho wemveliso yethu kwaye lunika isiqinisekiso kubathengi bethu.
2.Yenziwe ngeMbewu yamaDiliya yePremiyamu yaseYurophu
Sithenga phantse iitoni ezingama-5 000 zembewu yeediliya ekumgangatho ophezulu eYurophu unyaka nonyaka, ukuze imveliso ibe nomgangatho olungileyo kunye nomxholo we-oligomeric proanthocyanidins. Uhlobo oluthile kunye novavanyo oluthile lubonisa umgangatho wemveliso yethu kwaye linika isiqinisekiso kubathengi bethu.
Isikali esikhulu, iMveliso eQhubeka kunye neZenzekelayo
Ngezixhobo zokukhupha izixhobo ezizimeleyo ezizimeleyo, sinokondla iitoni ezingama-30 ngezinto ezingekenziwa ngemini enye, ezinokubonelela abathengi ngonikezelo oluzinzileyo lweemveliso.
Ukukhupha iMidiliya kwiProanthocyanidins 95
Iidiliya Imbewu Caphula Polyphenol 80%
Gcina kude nokukhanya okuqinileyo kunye nobushushu; kwindawo epholileyo neyomileyo; igcwele kwaye iqinile iphakheji, ubomi beshelufu bugqithile iinyanga ezingama-36 kwiphakheji yoqobo engavulwanga. Nje ukuba imixholo yokusebenzisa ivulwe ngokukhawuleza.
Egqithileyo Ijinja eyongezelelweyo